Medical Face Vuvu, abicah Laryngeal Vuvu, Banokubulawa Face Vuvu - Shanyou
Imaski yobuso beFlat
I-Anesthesia kunye nokuphefumla
Yasekwa ngo-2002, I-Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. iye yenza ukubulawa kunye neemveliso ezilahlwayo zokuphefumla. Siqala ukuvelisa Ubuso beMaski kwaye IPHEPHA ukusukela ngoFebruwari 2020 ngenxa yokuqhambuka kwesifo se corona. Iqinisekisiwe kunye CE, ISO13485 kwaye I-FDA, Inkampani yethu inandipha igama elihle phakathi kwabathengi bethu abavela kumazwe angaphezu kwama-50 afana neJamani, i-USA kunye neJapan, njlnjl. UMSEBENZI Iyanconywa kakhulu ngezinto ezikumgangatho ophezulu.
Ubuso beMaski yobuso, Uhlobo I
Ubuso beMaski yoNyango, Chwetheza i-IIR
Ukucoca iMask yesiqingatha seFFP2, i-CE0598
Ukucoca isiqingatha seMaski FFP2, CE2163
Ukucoca iMask yesiqingatha seFFP3
Isixhobo sokucoca umoya esingahlanjululwa ngesicoci soMoya
I-Hangzhou Shanyou Medical "UMSEBENZI" uthatha "uShanyou Spirit", oko kukuthi, "ukujolisa kwabathengi, itekhnoloji kunye nomgangatho sisiseko" sokusebenzela uluntu.
I-Hangzhou Shanyou Medical "UMSEBENZI" ulandela ngokungqongqo imigaqo yamanye amazwe yokwenza iimveliso zethu, qinisekisa ukuba into nganye iyahlangabezana nemigaqo ethile kunye neemfuno zabathengi.
Ilabhoratri igubungela i-500m2, ixhotyiswe ngezixhobo ezibanzi zovavanyo lweMaski yobuso bezoNyango kunye ne-FFP2, imaski ye-FFP3.
Kwintlanganiso, sasungula uthotho lweemveliso zemaski, umzekelo, iimaski zobuso zonyango, iimaski zobuso zotyando, Ukucoca iMask yesiqingatha, njlnjl.
232021 / ngoMatshi
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweemaski kunye nokukhuselwa kobuqu
Ukunxiba iimaski yindlela ebalulekileyo yokuthintela izifo zokuphefumla. Xa ukhetha iimaski, kuya kufuneka silamkele igama elithi "lonyango". Iimaski ezahlukeneyo zisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Iimaski zonyango ezilahlwayo ziyacetyiswa ukuba zisetyenziswe kwiindawo ezingenabantu abaninzi; Iziphumo ezikhuselayo zemaski yotyando zonyango zilunge ngakumbi kunaleyo yokulahla imaski yonyango. Kuyacetyiswa ukuba abantu abakhonza ...
Zeziphi izinto ezenziwa ngesigqumathelo sezonyango?
Iimaski zonyango ngokubanzi zikuluhlu lwemigangatho emithathu (engalukwanga), zenziwe ngamanqanaba amabini elaphu elingasukiyo elisontiweyo elisetyenziselwa unyango kunye nonyango, kwaye omnye umaleko wongezwa embindini waleya maleko mabini, enziwe Isisombululo sifafaze ilaphu elingalukwanga ngaphezulu kwe-99.999% yokucoca kunye neentsholongwane ezichasene ne-ultrasonic welding. Ulwaleko lwesithathu lokombatha kwemaski yonyango: umaleko ongaphandle ...